Vizrt Group na-akwado Daniel Url iji mee ka ndị ahịa lekwasị anya na Nrụpụta Ngwaahịa | NAB Gosi News | 2021 NAB Gosi Onye Mmekọ Media na Onye Mmepụta nke NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa
Home » Apụta » Vizrt Group goro Daniel Url iji mee ka ndị ahịa lekwasị anya na Mmepụta Ngwaahịa
Vizrt Group goro Daniel Url iji mee ka ndị ahịa lekwasị anya na Mmepụta Ngwaahịa
Vizrt Otu kwupụtara taa na Daniel Url abanyela na ụlọ ọrụ ahụ dịka Onye isi nke Global Product Management na-akọwara Michael Hallén, Onye isi oche na Onye isi ala.
Vizrt Otu bụ nzukọ nwere njikọta nwere ebumnuche akọwapụtara iji nyere ndị na-akọ akụkọ ụwa aka iweta akụkọ ndị ọzọ, ka ekwuru ya nke ọma. Daniel bụ onye isi njikwa na onye isi ahịa ahịa nke Qvest Media maka ihe karịrị afọ 11 na-elekọta ahịa oru ngo gụnyere nrụnye nke Vizrt ngwaahịa na Sky Sports Munich, ORF Vienna, Nine Network Sydney, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Site na ntọala siri ike na mmepe teknụzụ mgbasa ozi, arụmọrụ na ahịa, Daniel ga-ahụ na ụdị ndị otu ahụ; NewTek, Vizrt, na NDI®, ga-eweta ihe ọhụụ ahịa na-aga n'ihu na-abụ ihe ahịa na-esi na ya pụta. Qvest Media, dị ka mgbe niile, bụ ezigbo onye mmekọ nke Vizrt.
Daniel Url kwuru, sị, Aghọwo m onye nwere mmasị na ya Vizrt ruo ọtụtụ afọ na dịka onye kwere ekwe na ike nke ngwanrọ, IP, na teknụzụ igwe ojii iji gbanwee ụzọ ụwa si akọrọ akụkọ ya ka mma. Enweghị m ike icheta ebe ka mma m ga-anọ. ”
Url na ndị ọrụ nchịkwa ngwaahịa ga-arụ ọrụ nke ọma na ọrụ R&D nke Dr. Andrew Cross, Onye isi oche R&D na-eduzi Vizrt Otu, na-eme ike mmepe ngwaahịa nke otu a. Jikọtara, ụzọ abụọ ahụ ga-eme ka elekwasị anya na ịnyefe uru ndị ahịa site na imepụta ihe na ngwaahịa na ahụmịhe ka otu a wee nwee ike ịga n'ihu na-elekwasị anya na ọganiihu ndị ahịa.
Michael Hallén, onye isi oche na Onye isi ala kwuru, sị, “Obi dị m ụtọ inwe ike iwebata ahụmịhe Daniel na ikike ya n’ime Vizrt Otu ezinụlọ. Anyị nwere ọtụtụ atụmatụ na-atọ ụtọ maka ọdịnihu ma na-ewusi ọrụ mmepe ngwaahịa anyị ike n'ụzọ ga-enyere anyị aka ijere ndị ahịa anyị ozi, ọdịnaya ha ka mma bụ isi ihe a. ”
Daniel si ọtụtụ ndị ahịa-lekwasịrị anya na ahụmịhe na nghọta ga-akwado ya Vizrt Onyinye otu nyere maka ọgbọ na-esote nke akụrụngwa na-akọwaghị akụrụngwa akọwapụtara na akụrụngwa anaghị egbochi ọzọ, na-enyere ndị ahịa aka ịkọ akụkọ ha.
Previous: Foto Pace na-agbakwunye Mmetụta Mmeghe na Mariah Carey "Savechekwa Daybọchị"
Osote: Ìhè Iron na-agbasawanye ihe ngwọta dị iche iche maka imekọ ihe ọnụ